दस दिनपछि खुल्दैछ डीभी, भर्ने होइन त ? | Safal Khabar
दस दिनपछि खुल्दैछ डीभी, भर्ने होइन त ?
आइतबार, ०५ असोज २०७६, १६ : ३०
काठमाडौँ । अमेरिका जान पाइने डीभी चिठ्ठा भर्ने समय कहिले आउला भनेर कुरिरहनु भएको छ ? त्यसो हो भने अब तपाईंको प्रतीक्षा सकियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अमेरिकाको डीभी लोटरी आगामी अक्टोबर २ तारिखदेखि खुल्ने भएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर २ तारिख न्युयोर्क समय अनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि नोभेम्बर ५ दिउँसो १२ बजेसम्म डिभी लोटरी भर्न सकिने छ।
यसपटक डिभी लोटरीमा सहभागी हुनका लागि अमेरिकी सरकारले पासपोर्ट अनिवार्य बनाएको छ। डिभी लोटरी फर्म भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट जारी भएको देश, पासपोर्टको अवधि लगायतका विवरणहरु भर्नुपर्नेछ। पासपोर्ट पनि म्याद सहितको हुनुपर्नेछ।
मुख्य आवेदकका हकमा पासपोर्ट आवश्यक परेपनि परिवारका अन्य सदस्यहरुको विवरण बुझाउँदा भने ती सदस्यहरुको पासपोर्ट नम्बर आवश्यक नपर्ने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ ।
फेसबुकले बेलायतमा शुरु गर्यो नयाँ फिचर ‘फेसबुक न्यूज’
दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक बिरालोमा देखियो कोरोना संक्रमण